गौतमबुद्ध विमानस्थलको उडान तोकियो, मलेसिया र खाडीका यी देशबाट नियमित उडान हुने ! - jagritikhabar.com
गौतमबुद्ध विमानस्थलको उडान तोकियो, मलेसिया र खाडीका यी देशबाट नियमित उडान हुने !
सिबी अधिकारी/ ६ मंसिर, काठमाडौं ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परी’क्षण उडान (क्या’लिब्रेसन फ्ला’इट) गर्न थाइल्याण्डको एरो थाईले अनुमति पाएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्वसम्झौता अनुरूप एरो थाईलाई क्ला’लिब्रेसन फ्ला’इट गर्न अनुमति दिएको हो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल क्या’लिब्रेसन फ्ला’इटका लागि तयारी अवस्थामा छ। क्यालि’ब्रेसन फ्लाइट भनेको विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्दे’शित गर्न धावनमार्ग, टावरलगायतका क्षेत्रमा जडान भएका उपकरणले काम गरेका छन् या छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने प्रक्रिया हो।
यसका लागि जहाज नै ल्याएर उडान-अवतरण गर्नुपर्छ। एरो थाईले क्लालि’ब्रेसन फ्लाइ’ट गर्ने अनुमति पाएसँगै परीक्षण उडानको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अबको एक महिनाभित्रै परीक्षण उडान हुनेछ। त्यसबीचमा प्राधिकरणले आन्तरिक तयारी गर्नेछ। एरो थाई थाइल्याण्डको प्रतिष्ठित हवाई कम्पनी हो। थाई एयरवेजका लागि एटि’सीलगायत प्राविधिक जनशक्ति एरो थाईले उपलब्ध गराउने गरेको बताइन्छ।